ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း - နံပါတ်များအားဖြင့်လူမှုအထောက်အထား Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2013 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 23, 2021 Douglas Karr
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့် တွေ့ဆုံ၍ သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များအားဗီဒီယို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှကျော်တက်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီတွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်ရှိပြီးဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုသည်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းများပိုမိုရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းများပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စာရင်းသွင်းခြင်း၏တန်ဖိုးကိုသူတို့၏အလားအလာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဗွီဒီယိုသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိပရိသတ်များနှင့် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။ ငွေရှာဖို့ရှိရင်လူတိုင်းကပိုက်ဆံတစ်ချပ်ယူဖို့ကြိုးစားကြတယ် ဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး အနံ့အရသာ တချို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖုတ်ဖို့တောင်ကြိုးစားကြတယ်။
ကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များက၎င်းတို့သည်ဂူဂဲလ်ရလဒ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်သည် သလောက် 53 ကြိမ်.
ရှာဖွေမှုတွင်တွေ့ရသောဗွီဒီယိုစာရင်းများသည်တွေ့ကြုံခံစားတတ်ပါသည် 41 ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းထားများ သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ထက်။
Tags: ဟုတ်ကဲ့ကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းCTRတကယvideo ctrဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး infographicဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး seoဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး statsvideo serp
Sean Caillot ဟော့ကင်း
17:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 38
ဂူဂဲလ် Analytics သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်တိုတိုသော်လည်းချိုသာသောဗွီဒီယိုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာတစ်ခု! ၎င်းသည်ပြသထားသောကြောင့်၎င်းသည်ရှည်လျားသောစာများပါသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အခြားစာမျက်နှာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်နိမ့်ကျသောနှုန်းသည်ရှိသည်။